Bokin' i Hagay - Wikipedia
Bokin' i Hagay
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Hagay)
Ny Bokin' i Hagay na Bokin' i Akjea dia bokim-paminaniana ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly kristiana. Isan’ ireo atao hoe “mpaminany madinika” i Hagay na Akjea.
Ny Mpaminany Hagay, taona 985
Ny boky dia fitambarana faminaniana efatra izay ampitain’ i Hagay (na Akjea) amin’ i Zôrôbabela, governoran’ ny faritanin’ i Jodea, sy amin’ i Jôsoa mpisorom-be mandritra ny fanamboarana ny Tempoly faharoa tao Jerosalema tamin’ ny taonjato faha-6 tal. J.K. Ny mpaminany Hagay dia isan’ ireo izay namelona ny fahatongavan-tsain’ ireo Jiosy nantsoina taorian’ ny Fahababoana mba hanamboatra indray ny Tempoly ao Jerosalema tamin’ ny taona 516 tal. J.K. Ao amin’ ireo faminaniana ireo, i Hagay dia mamboraka ny faniriany hahita ny hahavitan’ ny Tempoly haingana.
2 Anaran' ny boky
3.1 Tsy firaharahana ny fanamboarana ny Tempoly sy ny vokany
3.2 Fampanantenana sy fankaherezana
3.2.1 Fanamelohana sy fitsarana ny Jentilisa
Ny fanambarana ireo lahatsoratra ireo sy ny fandraiketana azy farany dia nataon’ olon-kafa fa tsy nataon’ i Hagay, satria ny mpaminany dia tsy tondroin’ ny boky amin’ ny fampiasana mpisolo tena voalohany (izaho, aho, ahy). Tsy lavitra loatra ny fotoana nisehoan’ ny zavatra resahiny ny fotoana nanambarana ny boky.
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe ספר חַגַּי / Sefer Khaggai ny Bokin' i Hagay. Ao amin' ny Septoajinta amin' ny teny grika izy dia atao hoe Ἀγγαῖος Ιʹ / X Angaîos (ny ipsilôna Ιʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahafolo azy).
Azo zaraina telo ny Bokin’ i Hagay:
Tsy firaharahana ny fanamboarana ny Tempoly sy ny vokanyHanova
Ny faminanian’ i Hagay dia niseho tamin’ ny taona 520 tal. J.K., taona nampisy haintany sy tsy hafaliam-po teo amin’ ireo mpisesitany avy any Babilôna izay vao nody tao Jerosalema. Nanazava ny anton’ izany loza izany ilay mpaminany: ny vahoaka dia tsy niraharaha ny fanorenana ny Tempoly fa samy nanamboatra ny tranony avy. Namporisika an’ i Zôrôbabela sy i Jôsoa mpisorona mba hitaona indray ny vahoaka hanohy ny asa i Hagay (1.1-15).
Fampanantenana sy fankaherezanaHanova
Nitohy ny asa tamin' ny volana manaraka, nefa nila fankaherezana indray ny vahoaka. Nampivondrona azy ireo indray i Hagay tamin' ny nanambaràny fa hitoetra eo amin' izy ireo ny fanahin' Andriamanitra sady hanao izay hirotsahan' ny volamena sy ny volafotsin’ ny firenena rehetra no hofenoin' Andriamanitra amin' ny voninahiny ny Tempoly (2.1-9)
Fanamelohana sy fitsarana ny JentilisaHanova
Nifarana amin' ny faminaniana roa niseho taty aoriana tamin' io taona io ihany ny Bokin' i Hagay. Ny voalohany (2.10-19) dia manontany ireo mpisorona ny amin’ ny fahadiovana sy ny tsy fahadiovan’ ny fivavahana atao ao amin’ ny Tempoly, nohelohiny angamba ireo Samaritana izay manana fahazarana tsy madio sady nampanantena fahavokarana noho ny nahavitana ny Tempoly faharoa. Ny faminaniana faharoa (2.20-23) dia manambara ny andron’ ny Fitsarana izay handravana ny firenena jentilisa rehetra.
Hagay na Akjea
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Hagay&oldid=1041943"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 08:28
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 08:28 ity pejy ity.